Wonke umuntu uyazi ukuthi amakhala yisisu - izimpawu kubuhlungu ngempela ezihambisana imikhuhlane komzimba. Ukuze le mucosa wakwazi ukubhekana nalesi sifo, sebenzisa amathonsi ezahlukene futhi izifutho. Enye yalezi izidakamizwa isifutho acinene "Morenazal" chamomile. It is ngokukhethekile eyenzelwe izingane kanye nabantu abadala, ngubani ivame ukubhekana imikhuhlane zithambekele komzimba.
Isici kanye nokusungulwa
Ikani acinene uketshezi kungekho nto enemibala emihle ne iphunga kancane chamomile nokunambitha okunosawoti. "Morenazal" chamomile - isixazululo oyinyumba, okuyinto kuqukethwe ukubunjwa zemvelo uLwandle Lukasawoti, noma i-ejenti asizayo kuyinto chamomile.
Abantu Daisy Sekuyisikhathi eside kwaziwa ngezici zawo eqeda ukuvuvukala kanye isinqandakuvunda. Amafutha lokhu imbiza kuyasiza ukusheshisa izinqubo okuzivuselela in the mucosa acinene, okuvumela iza kwenze nesiguli sisheshe silulame.
Sea usawoti iqukethe amaminerali ukulandelela izakhi, okuyinto ukwenza njenge eqeda ukuvuvukala kanye amafutha okuthambisa. Lezi zakhi neqhaza ukusheshisa umsebenzi okuzivuselela futhi ayisivikelo epithelium ciliated abami elingenhla ipheshana zokuphefumula. Lezi izindawo zikuvumela ukuba ngcono acinene ukuphefumula ukwandisa acinene mucosa ukumelana amagciwane ahlukahlukene namagciwane.
Futha sici kunenzuzo wukuthi yokukhiqiza ubuchwepheshe yayo evumela ukugcina ayelapha zezinto asebenzayo. Ngakho-ke, "Morenazal" ingasetshenziswa kulo lonke usuku lokuphelelwa yisikhathi. Ukulungiswa iqukethe akukho nezivimbelakuvunda futhi ekhiqizwa polymeric izitsha eziyisikhombisa nomthamo 20 ml no-50 nge elula nokushintsha kokudla nokufakwa umlomo wombhobho.
"Morenazal" nge chamomile ikakhulukazi ezihloselwe ukwehlisa ukuvuvukala mucosa acinene, ugeze khona futhi ihlanzekile. spray acinene isetshenziswa ekwelashweni eziyinkimbinkimbi rhinitis nezinye izifo ezithinta elingenhla ipheshana zokuphefumula.
Umthelela zokwelapha zomuthi simiswe ngalendlela lelandzelako:
• kususa isikhwehlela okweqile, equkethe amagciwane abangela izifo namagciwane, uthuli kweminye imithombo ukuvuvukala e rhinitis;
• ehlanza amavesi acinene kusukela soma;
• Kusiza ekudambiseni ukucasulwa ubala futhi moisten mucosa acinene;
• kunomthelela nokunciphisa futhi ususe izikali soma emva kokuhlinzwa esikhathini ingaphakathi acinene futhi sinuses paranasal, kanjalo sigweme ukopha;
• ubuyisela acinene ukuphefumula e rhinitis.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa "Morenazala" sithuthukisa umphumela zokwelapha izidakamizwa ukuthi zisetshenziswa le mucosa acinene futhi ukuvimbela ekuqhubekeleni phambili kwezindaba ukutheleleka ngegciwane le sinuses paranasal kanye ingaphakathi indlebe.
Kwezinye izimo, sebenzisa "Morenazal" nge chamomile
Umhlahlandlela ukulungiselela liqukethe ulwazi ukuthi spray acinene isetshenziselwa ukwelapha nokuvimbela izifo ezithathelwanayo sokuvuvukala ingaphakathi acinene, sinuses paranasal futhi nasopharynx.
"Morenazal" futhi eliphumelelayo rhinitis oyingozi futhi ezingalapheki futhi sinusitis Lokudabuka ezithathelwanayo (kuhlanganise sinusitis futhi sinusitis). Isetshenziselwa ngempumelelo njenge-agent prophylactic nokwelapha izifo zokuphefumula e ekwindla nasebusika.
Ngaphezu kwalokho, "Morenazal" intengo kuqhathaniswa ezinengqondo, kutilolonga emva kokuhlinzwa esikhathini ingaphakathi acinene futhi sinuses paranasal. Ngalo, siqeqeshe isingeniso phakathi komgodi acinene nezinye imithi.
Njengoba kushiwo ngenhla, fafaza "Morenazal" ingasetshenziswa izingane ezivela 1 unyaka kanye nabantu abadala. Isetshenziselwa intranasally, okungukuthi ngokusebenzisa ekhaleni nsuku zonke. Inombolo kanye nokuvama imijovo incike yobudala lesiguli. Imininingwane ngale ndaba uvezwa isithebe isifinyezo, okuyinto ufika uphelele spray. Futhi, imfundo wathi lokufeza ukulungiselela nokugeza kufanele kube angaphansi kwemithetho kwenhlanzeko. lavage acinene izingane ezingaphansi kweminyaka 2 ubudala wenziwa isikhundla lisalele. Uma usebenzisa "Morenazal" nge chamomile izingane eminyakeni engaphezu kwengu-2 kanye nabantu abadala, lesi sifutho umjovo Kwenziwa emi nekhanda lakhe esitshekile nganxanye.
"Morenazal" nge chamomile wathola eziningi okubuyayo kubasebenzisi. Lokhu akusona isimanga, ngoba izinzuzo a acinene fafaza kakhulu.
Okokuqala, ukubunjwa yayo kungokwemvelo ngokuphelele, ngakho "Morenazal" has cishe akukho contraindications ayinayo imiphumela eseceleni. Kuphela ezimweni ezingajwayelekile singenzeka isici esiyingqayizivele zomuthi elihlobene ne izingxenye zalo. Ikani ingasetshenziswa kokubili abadala kanye nezingane kusukela ngonyaka 1. Ngaphezu kwalokho, kuphephile ngenkathi bekhulelwe nangenkathi bencelisa.
Okwesibili, spray Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ngamunye press umlomo wombhobho dispenser oluhambisana eyodwa umjovo we alinganisiwe.
Okwesithathu, "Morenazal", intengo okuyinto ngokwesilinganiso ruble mayelana 250 50 ml ngokwanele ukonga ekusebenziseni. Omunye pack of 50 ml kwanele isikhathi eside, njengoba yakhelwe lonke 350 izifutho!
Acinene fafaza "Morenazal" chamomile - ikhambi onokwethenjelwa futhi ephephile rhinitis eyabonakala kahle eliphezulu ngokuphindaphindiwe. isicelo sayo liyatholakala kubo bonke. Umkhawulo kuphela izingane ezincane enyakeni 1 nabantu ukungabekezelelani ngabanye wezinto spray. Nge "Morenazala" uzokwazi zokudambisa isimo phakathi abandayo futhi ngesikhathi izimbali, futhi ayeke ukukhathazeka mayelana nempilo yezingane.
"Diclofenac" - yokusetshenziswa wamafutha kanye gel
Ukucaciswa "Nissan Patrol" 2013 imodeli uchungechunge
Ukulungisa kwamandla ikhompyutha supply: imithetho umsebenzi